Christie Agatha. Sanad guuradii dhalashadiisii. Xulashada weedhaha | Suugaanta Hadda
Mariola Diaz-Cano Arevalo | 15/09/2021 12:00 | Qorayaasha, Novela, Riwaayad madow
Christie Agatha, aan muran lahayn reina del qarsoodi iyo kuwa sheeko -baare, ayaa weli aad ugu sugan dhammaan taageerayaasha hiddaha. Maantana waa dhalashadiisii. Wuxuu jabiyay dhammaan diiwaanadii iibka ee waagiisii ​​isagoo ku dhawaad 4.000 milyan oo buug ayaa la iibiyay kuna sii soco madasha. Intaa waxaa dheer, nolosheeda ma ahayn mid qarsoodi ah kow iyo toban maalmood oo ay ka maqnayd iyada oo aan si dhab ah u ogeyn waxay samaysay. Oo, maadaama maanta ay tahay dhalashadeedii, waxaan ku xusuusan doonnaa hal mar annagoo tan ku akhrinayna xulashada weedho iyo jajab Ee shuqulladiisa.
Christie Agatha. Xulashada weedhaha iyo jajabyada
Qaddarku mararka qaarkood waxay u muuqataa inay ku jeesjeesayso aadanaha iyagoo ku raaxeysanaya ogaanshaha waxa ay jeclaan lahaayeen inay qariyaan.
Qarsoodiga tareenka buluuga ah
Mararka qaar waan hubaa in uu u waalan yahay sidii nacasnimo ka dibna kaliya marka uu aad u waalan yahay waxay iila muuqataa in uu jiro hab lagu waasho.
Xaaladda dahsoon ee Noocyada
Ujeeddooyinka dilka mararka qaar aad ayey u yar yihiin, marwo.
"Waa maxay ujeeddooyinka ugu badan, Mr. Poirot?"
"Waxa ugu badan waa lacag." Taasi waa, inaad ku guuleysato dhibaatooyinkeeda kala duwan. Markaas waxaa jira aargoosi iyo jacayl, iyo cabsi saafi ah iyo nacayb, iyo samaan.
"Haa, marwo." Waan maqlay; dheh A, oo lagu baabi'inayo B oo kaliya danta C. Dilalka siyaasadeed badiyaa waxay ku yimaadaan isla ciyaar. Qof ayaa loo arkaa inuu yahay mid waxyeello u leh ilbaxnimada taas ayaana looga takhalusay. Dadka caynkaas ahi waxay iloobaan in nolosha iyo geeridu ay tahay shuqulka Sayidka wanaagsan.
Dhimashada webiga Niil
Dumarku waxay si qarsoodi ah u fiiriyaan kun faahfaahin yar, iyagoo aan ogeyn inay sameynayaan. Maskaxdaada miyir -qabka ah ayaa kulmisa waxyaalahan yaryar oo dhan waxayna ugu yeeraan dareen -gelinta natiijada.
Dilkii Roger Ackroyd
Qof walba markasta wuu ogyahay wax, "Adam ayaa yidhi," xitaa haddii ay tahay wax aysan garanayn inay ogyihiin.
Bisad shinbiraha ku jirta
Ma jiraan wax aad u xun sida ku noolaanshaha deegaan shaki ku jiro, arkaya indho ku eegaya iyo sida jaceylku ugu beddelayo cabsi darteed, wax aad u xun ma aha inaad ka shakiso qof kuu dhow oo aad jeceshahay. Waa sun, miasm.
Qarsoodiga hagaha tareenka
Naag goormay been sheegi doontaa? Mararka qaar iyada kaligeed. Badanaa ninka ay jeceshahay dartiis. Had iyo jeer carruurtooda.
Dilka goobta golf-ka
Waxa ay u baahan yihiin waa xoogaa anshax xumo ah noloshooda. Markaa kuma mashquulayaan inay dad kale ka raadiyaan.
Dhimashadii dadkii ku jiray
Toban nin oo madow yar ayaa casho u baxay. Mid wuu liqay oo waa loo daayay: Sagaal.
Sagaal madoow oo madow ayaa soo daahay. Midkood ma uusan toosin oo way sii joogeen: Sideed.
Sideed madow yar ayaa soo maray Devon. Mid baa baxsaday iyaguna way hadheen: Toddoba.
Toddoba wiil oo yaryar oo madow ah ayaa qoryo ku gooyay faas. Mid laba ayaa loo kala jaray iyagana waa loo daayay: Lix.
Lix wiil oo yaryar oo madow ayaa ku ciyaaray shinni. Mid ka mid ah ayaa shinnidu ku dhufatay oo ay ku hareen: Shan.
Shan nin oo madow madow ah ayaa bartay sharciga. Midkood ayaa helay dhakhtar, waxayna sii joogeen: Afar.
Afar nin oo madow yar ayaa badda aaday. Xarig cas oo liqay midkood oo ay ku hareen: Saddex.
Saddex madoow oo yar yar ayaa soo dhex maray beerta xayawaanka. Orso ayaa weerartay iyagii oo loo daayay: Laba.
Laba madow oo yar yar ayaa qorraxda fadhiya. Midkood waa la gubay wuuna hadhay: Mid.
Nin yar oo madow ayaa kaligiis ahaa. Wuu is deldelay, oo midna ma hadhin!
Marna ha sheegin wax kasta oo aad taqaan, xataa haku sheegin qofka aad sida ugu fiican u taqaan.
Dahsoon Mr. Brown
Si xamaasad leh u xanaanaynta xayawaan kale oo bani’aadam ah mar walba waxay keentaa xanuun ka badan farxad; laakiin isla markaa, Elinor, midna ma waayo waayo -aragnimadaas. Qof kasta oo aan waligiis jeclayn weligiis ma noolaan.
Beroosh murugo leh
Maroodigu wuu xasuusan karaa, laakiin waxaan nahay bini aadam nasiib wanaagna aadanaha ayaa ilaabi kara.
Maroodigu wuu xasuusan karaa
Runtu waxay tahay in dadka intiisa badan, oo aan ka reebin bilayska, ay aad ugu kalsoon yihiin adduunkan sharka leh. Aad u rumayso waxa loo sheego. Ma sameeyo. Waan ka xumahay, laakiin mar walba waxaan rabaa inaan si shaqsi ah wax u ilaaliyo.
Mayd maktabadda ku yaal
Wadada buuxda ee maqaalka: Suugaanta hadda jirta » Suugaanta » Qorayaasha » Christie Agatha. Sanad guuradii dhalashadiisii. Xulashada weedhaha
José Javier Abasolo. Wareysi lala yeeshay qoraaga Original Version